Mashaariicda - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ayada oo si joogta ah uga dhex shaqaynaysay bariga iyo bartamaha Soomaaliya MSF ayaa wali ah fidiyaha ugu way nee daryeel caafimaad oo lacag laáan ah waxayna mashruucya mudo dheer soo jiray ku leedahay gobollada Banaadir, Bay, Hiiraan, Galgaduud,Jubadda Hoose, Shabeelaha Dhexe, Shabeelaha Hoose iyo Mudug.
Sanadkii 2010 MSF waxay sahaqo ka bilowday Gobolka Maroodijeex ee Somaliland. Kooxda MSF waxay ka as’aasayaan Mashrruc Kale gobolka Sanaag ee Somaaliland.Wadanka Itoobiya MSF waxay gobolka ay Soomaalidu degto ay ku caawisaa qoxooti ka soo qaxay Soomaaliya iyo dada jinsiyadoodu Somali tahay oo Itoobiya u dhashay. MSF waxaa kale oo ay dareey caafimaad oogu fidisaa Somaalida qoxottiga iyo magan galyo doonka ku ah wadamada Jabuuti , Masar , Kenya , Malta iyo wixii ka horeeyay mudo dhow wadanka Yemen.
Booga Mashaariicda MSF ee loogu Gargaarayo Soomaalida
Mashaariicda Guud ee MSF
MSF waa ururka caafimaadka bani’aadamnimada ku dhisan ee ugu weyn dunida oo dhan, oo mashaariic ka wada in ka badan 65 dal. Yoolka MSF waa in gargaar degdeg ah ay siiso dadka ay saameeyeen iskahorimaadyada hubeysan, cudurrada saf-mareenka ah, kuwa aan haysan daryeel caafimaad iyo kuwa ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dad sameega ah. Akhri waraka guud ee MSF